Egwuregwu ịntanetị kachasị mma na ndị enyi | Nzukọ mkpanaaka
Egwuregwu ịntanetị kachasị mma na ndị enyi
Edere Ferreno | 01/11/2021 13:31 | Egwuregwu
Nhọrọ nke egwuregwu mkpanaka buru ibu, nwere egwuregwu nke ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na Play Store ma ọ bụ App Store. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ibudata egwuregwu ka ha na ndị enyi ha nwee ike igwu egwu n'ịntanetị. Ụzọ dị mma isi soro ndị enyi na-asọrịta mpi ma ọ bụ na-emekọrịta ihe, na-enweghị mkpa ịnọ n'otu oghere. Mgbe ahụ, anyị na-ahapụ gị egwuregwu kacha mma n'ịntanetị ka gị na ndị enyi gị gwuo egwu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu ịntanetị ị ga-eso ndị enyi gị na gam akporo ma ọ bụ iOS, anyị na-ahapụ gị na nhọrọ nke kacha mma. Ị nwere ike ịhụ na e nwere ọtụtụ ụdị egwuregwu n'echiche a, ma n'ime ha niile ị ga-enwe ike igwu egwu na ndị enyi gị n'ịntanetị, na-enweghị ịnọ n'otu ebe. Na mgbakwunye, ndị a bụ egwuregwu ị nwere ike ibudata n'efu.
1 Agha ọduọ kpakpando
4 Scrabble Gaa
6 hay Day
Agha ọduọ kpakpando
Egwuregwu mbụ na ndepụta ahụ sitere na Halfbrick Studios, otu n'ime ụlọ ihe nkiri kachasị ewu ewu taa. Ha na-ahapụ anyị egwuregwu ikpo okwu na-atọ ụtọ nke a na-egosi dị ka otu n'ime egwuregwu ndị ahụ dị mma iji soro ndị enyi gwuo ịntanetị. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ nhọrọ kachasị mma n'ihi na ọ na-enye anyị ohere ịnweta egwuregwu na-agba ọsọ ngwa ngwa, nke na-enyere aka izere ịdị arọ ma si otú a na-enye anyị ohere ịme egwuregwu n'oge ọ bụla.
N'egwuregwu ọtụtụ egwuregwu a, anyị ga-amali elu, fepụ, gbaa ọsọ ma ọ bụ gbaa ihe niile anyị chọtara n'ụzọ anyị ka anyị nwee ike imeri. Isi ihe bụ na anyị ga-adị ngwa ngwa karịa onye ọ bụla ọzọ wee si otú a na-emeri ọkwa niile dị iche iche na-echere anyị na ya. Nhọrọ dị mma iji soro ndị enyi gwuo egwu, dị mfe ịchịkwa ma na-atọ ụtọ n'ezie, nke bụ akụkụ ọzọ ị ga-eburu n'uche.
Agha ọduọ kpakpando enwere ike ibudata ya n'efu na ekwentị Android anyị, dị na Ụlọ Ahịa Google Play. Egwuregwu ahụ nwere ịzụrụ ihe n'ime, nhọrọ mgbe niile, mana ị nwere ike ịga n'etiti ọkwa ya dị iche iche na-akwụghị ego.
Agha Egwuregwu Egwuregwu - Egwuregwu Egwuregwu
Developer: Flọ nka Halfbrick
Omuma nke anyị nwere ike ibudata na ekwentị anyị Nke ahụ bụkwa otu n'ime egwuregwu ịntanetị ndị enyi gị na-egwu. Otú tetris si arụ ọrụ mara onye ọ bụla. Anyị ga-etinye ọnụ ọgụgụ dị iche iche n'ụzọ ga-eme ka anyị nwee ike iwepụ ahịrị, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ndị a kwadoro. Ihe isi ike na-abawanye, n'ihi na nke nta nke nta na-agba ọsọ nke ọnụ ọgụgụ na-atụba na-abawanye, n'ihi ya, anyị ga-etinye ha ngwa ngwa, ma ọ bụghị n'ụzọ ọ bụla, ma anyị ga-enwe ezi ọhụụ ma mara ebe ha na-edebe ha ka ndị ahịrị. na-akpụ akpụ.
Ụdị egwuregwu a pụtara maka inwe ụdịdị dị iche iche, nke na-enye anyị ohere ihu ndị enyi. Anyị nwere agha royale na ụdị asọmpi dị, yana usoro otu onye. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ihu enyi na egwuregwu tetris online na ekwentị anyị. N'ụdị egwuregwu ndị a anyị na-eche enyi ihu, anyị ga-ahụkwa ka ihe isi ike na-abawanye. Yabụ na ọ bụ ezigbo ule ịhụ nke kacha mma n'ime ha abụọ n'egwuregwu a.
Ụdị tetris ọhụrụ a nwere ike ịbụ download n'efu na ekwentị anyị, dị na Play Store. N'ime egwuregwu ahụ, e nwere ịzụrụ ihe na mgbasa ozi, n'agbanyeghị na anyị na ndị enyi anyị nwere ike igwu egwu n'ịntanetị na-akwụghị ego. Ị nwere ike ibudata egwuregwu ahụ na mkpanaka gị site na njikọ a:
Developer: Ụlọ ọrụ N3TWORK Studios Inc.
Egwuregwu nke atọ dị na ndepụta ahụ bụ otu n'ime egwuregwu ịntanetị kachasị amasị anyị na ndị enyi anyị nwere ike ibudata. N'egwuregwu a anyị anyị na-aghọ ụfọdụ ndị ji egbe plastik. Ọrụ anyị bụ ka anyị buo ụzọ gbapụ ndị egbe egbe ihu, ka anyị wee bụrụ ndị mmeri na duels ndị a. N'egwuregwu ahụ, anyị nwekwara ụdị ọrụ dị iche iche anyị ga-emerịrị, nke anyị ga-egosipụta nkà anyị mgbe anyị na-agbapụ.
Gumslinger nwere asọmpi ịntanetị ebe anyị nwere ike soro ndị enyi anyị, yana ndị egwuregwu ndị ọzọ gwuo egwu, ebe ọ bụ na ha bụ asọmpi nke. ihe ruru ndị egwuregwu 64 na-esonye. Naanị otu n'ime ndị so na ya ka a ga-ekpu okpu mmeri. Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị na egwuregwu a bụ physics ya, ebe ọ bụ na mgbe mgbọ na-adaba n'àgwà anyị, a na-emepụta mmetụta na-adọrọ mmasị nke ukwuu, nke na-eme ka ọ dị ịrịba ama. Isi ihe dị mma maka eserese ya, nke doro anya na-enyere anyị aka ịbanye na akụkọ a.
Nhọrọ dịtụ iche na ndepụta a, mana nke kwesịrị ịnwale. Egwuregwu a sỌ dị n'efu na Google Play Store, ebe anyị nwere ike ibudata ya na ekwentị Android anyị. N'ime enwere ịzụrụ na mgbasa ozi, mana anyị nwere ike isonye na ihe ịma aka na ọgụ ha na ndị egwuregwu ndị ọzọ na-enweghị akwụ ụgwọ. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
N'ebe nke anọ, anyị na-ahụ egwuregwu bọọdụ kpochapụwo, na anyị nwere ike ugbu a na-egwu online na ndị enyi na anyị mobile. N'okwu a, anyị nwere ike ihu ndị enyi anyị ihu, yana ndị egwuregwu a na-amaghị ama na-ejikọta ya ugbu a. Ọ ga-eme ka anyị nwee ọtụtụ egwuregwu, bụ́ ebe ọ ga-ekwe omume iji gosi ikike anyị nwere iji mkpụrụ akwụkwọ ndị anyị nwere dee okwu. N'ezie, okwu iju ga-enye anyị isi ihe, ya mere egwuregwu a bụ ohere dị mma iji chọpụta okwu ọhụrụ.
Ọrụ nke egwuregwu a agbanwebeghị ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. A na-eme egwuregwu ahụ n'usoro n'usoro ka anyị wee nwee ike ịmepụta okwu ndị anyị chọrọ iji wee bụrụ ndị mmeri n'egwuregwu ahụ. Na mgbakwunye, na egwuregwu a, a na-ahapụ anyị ka anyị na ndị enyi nwee ọtụtụ egwuregwu n'otu oge, maka ndị na-achọghị ichere. Egwuregwu ahụ nwekwara ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ike ịhazi taịlị nke gị.
Scrabble Go bụ egwuregwu ahụ anyị nwere ike ibudata n'efu site na Play Store na ekwentị Android anyị. Enwere ike ịme egwuregwu nkịtị ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'enweghị ịkwụ ụgwọ ego. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, dị ka ịhazi tokens, mgbe ahụ anyị ga-akwụ ụgwọ ego. Ị nwere ike ibudata egwuregwu ahụ site na njikọ a:
Egwuregwu nke maara imeri ọtụtụ nde ndị egwuregwu na gam akporo na iOS bụ Mario Kart Tour. Egwuregwu a mechara bịa na ekwentị mkpanaaka ka ogologo oge chere na ọ bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ dị mma iji soro ndị enyi gwuo ịntanetị. N'ime egwuregwu a, anyị na-eche asọmpi kart na-adịghị mma nwere njirimara Nintendo mara mma, na sekit dị iche iche. Ọrụ anyị bụ imeri n’ọsọ ahụ, bụ́ ihe anyị ga-emerịrị site n’ịkwọ ụgbọ ala karịa ndị anyị na ha na-asọrịta mpi, nakwa site n’ịghọ aghụghọ ule ma ọ bụ enyemaka ọzọ. Egwuregwu na-ekwe nkwa egwuregwu kacha atọ ụtọ mgbe niile.
Ụdị egwuregwu a edebewo ihe ndị mere ka ọ bụrụ ihe a ma ama maka ọtụtụ nde ndị egwuregwu. Na mgbakwunye na ịnọgide na-enwe ezigbo ndịna-emeputa, nke bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na akụkụ ọzọ na-enye aka na ewu ewu ya. Ikike igwu egwu n'ịntanetị na ndị egwuregwu ndị ọzọ Ewebatara ya na egwuregwu ahụ oge ụfọdụ gara aga, yabụ ị nwere ike ịsọ mpi na ndị enyi gị n'ọtụtụ sekit ya wee hụ onye kpuchiri okpueze dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala kacha mma na nke a.
Njem Mario Kart bụ egwuregwu anyị nwere ike ibudata n'efu, ma na android na iOS. Egwuregwu ahụ nwere ịzụrụ ihe n'ime, nke anyị nwere ike ịnweta usoro nke ọrụ ndị ọzọ. Enwekwara ngafe oge dị, nke na-enyekwa anyị ọtụtụ uru, mana nke a bụ ihe ị kwesịrị ịtụle onwe gị. Ị nwere ike ibudata egwuregwu ahụ na Play Store na njikọ a:
Hay Day bụ egwuregwu sitere n'aka Supercell, ndị mepụtara nnukwu ihe ịga nke ọma dịka Clash Royale, Brawl Stars ma ọ bụ Clash of Clans. N'okwu a, ha na-ahapụ anyị egwuregwu na-ebuga anyị n'ugbo. Ọrụ anyị n'ugbo a bụ ịzụlite ụdị ngwaahịa dị iche iche, nke anyị nwere ike ree ndị ọzọ na-egwu egwuregwu na ya (ndị enyi anyị na nke a). Na mgbakwunye na inwe ike inwe anụmanụ, dịka ọmụmaatụ, ka ugbo anyị wee too.
A na-egosi ụbọchị Hay dị ka egwuregwu kacha mma ịme n'ụzọ dị jụụ, ka anyị na ndị enyi anyị nwee ike ịmepụta mpaghara ma ọ bụ obodo. Anyị nwere ike ime ka ebe ahụ na-eto eto, na-emepụta ihe na-emepụta ihe, gbasaa ala ma wuo ụdị ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọhụrụ na ya. Egwuregwu a nwere ike icheta egwuregwu dị ka egwuregwu ugbo Facebook, naanị na nke a, anyị nwere ọtụtụ ihe na eserese ka mma, nke pụtara na anyị nwere ike iji ọtụtụ awa na-egwu ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale egwuregwu a, ịnwere ike ibudata ya n'efu site na ekwentị gam akporo gị, dị na Play Store. N'ime Hay Day, anyị na-achọta ịzụrụ ihe, nke na-enyere anyị aka ịkwaga ngwa ngwa, mana ha bụ ịzụrụ nhọrọ oge niile. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Egwuregwu ịntanetị kachasị mma na ndị enyi
Kedu ihe kpatara WiFi anaghị egosi na Windows 10 yana otu esi ahụ ya
Ebe ị ga-ebudata akwụkwọ ahụaja 4K maka kọmputa gị